Xubno ka kala socda DFS & Dowlad Goboleedyada oo Shir uga furmayo Dhuusamareeb - HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xubno ka kala socda DFS & Dowlad Goboleedyada oo Shir uga furmayo...
Xubno ka kala socda DFS & Dowlad Goboleedyada oo Shir uga furmayo Dhuusamareeb
Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug waxaa Galabta si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi horkacayo Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Col. Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi).
Hey,adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa Dhuusamareeb ku leh shirkoodii saddex billaha ahaa oo ay ka qeyb galayaan dhamaan madaxda Hey,adda socdaalka u qaabilsan 5-ta Maamul Goboleed, madax qeybeed-yada iyo madax waaxeedyada waana shir saddexdii bilba mar la qabto.
Agaasimaha Socdaalka iyo Jinsiyadda Gaashaanle Sare Koofi ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu la kulmao Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi kAARIYE ( Qoor Qoor), iyaga oo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah.
Diyaar garoowga Shirka u dhaxeeya Xubnaha ka kala socda Hey,adda Socdaalka iyo Jinsiyadda ayaa waxaa siweyn looga dareemayaa Magaalada Dhuusamareeb, waxaana maalinta berito ah halkaasi tegi doona Xubno ka socda Dowlad Goboleedyada.
Sidoo kale Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in Maalinta Berito ah Agaasimaha Guud ee Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Col. Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) uu xariga ka jari doono bar-xaduudeedkii Qeydar oo ah xuduud beenaadka dalkeena iyo dalka aan dariska nahay ee Ethiopia.
Previous articleAlshabab oo weerar culus ku qaaday deegaanka…..
Next articleAqri deni iyo axmad madoobe oo Muqdisho imanaya maxa lagu qanciyay?